शेयर बजार : साँढेको जुधाई -बाच्छाको मिचाई !!! दुई कांग्रेसी जुधाईको शिकार !!! - Inquiry Nepal
शेयर बजार : साँढेको जुधाई -बाच्छाको मिचाई !!! दुई कांग्रेसी जुधाईको शिकार !!!
नेपाल न्युज , माघ १४ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्चेन्जमा रहेका दुई काँग्रेसीको झगडाका कारण मुलुकको धितोपत्र बजार नराम्ररी प्रभावित भएको आजको जनआहवान साप्ताहिकमा खवर छ ।